Xisbiga WADDANI Oo Ka Baxay Heshiiskii Ay Xisbiyadda Qaran Wadda Gaadheen – WARSOOR
Xisbiga WADDANI Oo Ka Baxay Heshiiskii Ay Xisbiyadda Qaran Wadda Gaadheen
Hargeysa – (warsoor) – Hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee Waddani Xirsi Xaaji Cali Xasan ayaa sheegay in xisbiga WADDANI uu ka baxay heshiiskii ay saddexa xisbiga qaran wadda gaadheen.
Heshiiska ay saddexa xisbi qaran wadda dhigteen oo nuxurkiisu ahaa in tiradda komishanka doorashooyinka oo hadda ah 7 xubnood lagu kordhiyo 2 xubnood oo cusub.
Go’aanka xisbiga WADDANI ayaa ka dhashay ka dib markii Golaha Wakiiladda Somaliland kalfadhigoodii shalay ay ku laaleen heshiiska.
Golaha wakiiladda ayaa sheegeen in aanu goluhu ka doodin mooshinka wax lagaga badalaayo Xeerka doorashooyinka madaxweynaha iyo golayaasha qaranka Xeer No.20/2001, qodobkiisa 11, qodobkaasii oo la soo jeediyey in la kordhiyo tiradda komishanka doorashooyinka Qaranka.
Xisbiga WADDANI ayaa ku eedeeyey xukuumadda kulmiyey inay si indho la’aan ah u buriyeen heshiiska ay xisbiyaddu gaadheen. Xisbiguna waxaa uu ku dhawaaqay inay ka baxeen heshiiskaasi oo aanu heshiiskaasi qabanaynin.
Sh.Shibli oo Jawaab Kuluul Siiyey Madaxweynaha Faransiiska
Sheekh Shibil ayaa jawaab ka bixiyey hadal islaam naceyb ah oo ka soo yeedhay madaxweynaha Faransiiska. Arintan uu ku ku kacay madaxweynaha Faransiiska oo uu ku taageeray nin gaal ah…
Guddida Qandaraasyda Qaranka Somaliland Oo Tartan U Qabtay 204 Shirkadood Oo Ku Tartami Doona Mashaariic Dawladu Higalin Doonto
HARGEYSA – (WARSOOR) – Guddida qandaarsyada qaranka Somaliland ayaa tartan u qabtay 204 shirkadood, kuwaas oo ku tartami doona qandaraasyda mashaariic ay xukuumadda Somaliland ka fulin doonto qaar ka mida…